ပြည်သူလူထုအား ပေါ်တာ လုပ်အား မခေါ်ရေးသမ္မတ အမိန့် နယ် စပ်ဒေသအထိ သက်ရောက်ပြီ ~ Myanmar Express
ပြည်သူလူထုအား ပေါ်တာ လုပ်အား မခေါ်ရေးသမ္မတ အမိန့် နယ် စပ်ဒေသအထိ သက်ရောက်ပြီ
ပြည်သူလူထုအား လုပ်အားခေါ်ယူခြင်း၊ ပေါ်တာ ထမ်းခိုင်းခြင်းမပြုရေး နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ အမိန့် ချင်းပြည်နယ် နယ်စပ်ဒေသအထိ အာဏာသက်ရောက်မှူ ရှိပြီဟု ဒေသခံတဦးက ပြောသည်။ ဖေါ်ပြပါ နိုင်ငံတော် သမ္မတအမိန့်ကြောင့်ပြည်သူ့ရဲ၊ နယ်မြေခံ တပ်မတော်သားများအနေနှင့် ဒေသခံ ပြည်သူတွေကို လုပ်အား၊ ပေါ်တာတွေခေါ်မှာ မဟုတ်တော့ကြောင်း မတူပီမြို့နယ်လိုင်လင်းပီရွာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဦးက ပြောသည်။“ အခု လိုင်လင်းပီ ပြည်သူရဲ မိသားစု လိုင်းတွေကို ပြည်သူရဲတွေကိုယ်တိုင် ဆောက်နေကြတယ်၊ ” ဟု လိုင်လင်း ပီရွာသားတဦးက ပြောသည်။တပ်မတော်ဖက်က ပေါ်တာဆွဲတာတွေ အဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းတာတွေ လုံးဝ မရှိတော့ပေမယ့် KIA ဖက်ကတော့ အင်အားချိနဲ့လာမှုကြောင့် ပေါ်တာတွေ အလွန်အကျွံဆွဲကာ ဆက်ကျေးတွေ အဓမ္မ ကောက်ခံနေကြောင်း ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။Myanmar Express
Posted in: တိုက်ပွဲသတင်း
နိုင်ငံရေးပါတီ တည်ထောင်လိုသူများက ပြည်ထောင်စု ရွေး...
မြန်မာလူငယ် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား ဂျပန်မှ ပညာတော်...
ကေအိုင်အေ(ကချင်) အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့ ကချင...
မြန်မာ လူမျိုးများသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးတ...
နောက်ဆုံးတော့ "ဖွတ် ဖွတ်ချင်း အမြီးလိမ်"
အင်တာနက်သုံးသူ အမေစု သား/သမီး များအတွက် သင်တန်း တစ...
Economic Investment & Possibility of Lifting Sanct...
မသစ် ၊ မထူး တဲ့ လိမ်ဆင်တွေနဲ့ သစ်ထူးလိမ်
နိုင်ငံတော်နှင့် တပ်မတော်၏ သဘောထားအမှန်ကို သိမြင်၍...
တဏှာရူး သွန်းနေစိုး အား ကာမလိမ်လည်မှု့ဖြင့် မင်္ဂလာတေ...
ပြည်သူကို မိုင်းထောင်သတ်ဖြတ်၊ အတင်းအဓ္ဓမ လူသစ်စု ရှ...
မွတ်ဆလင် ပါတီ တည်ထောင်မယ့် ၈၈ ကျောင်းသားဟောင်း မြေ...
ကျည်ကာ အရေပြား ထုတ်လုပ်မှု မျှော်လင့်ချက် ရောင်ခြည်...
သင်္ကန်းတောင်းကျက်ပြီးမှ ကိုရင်မ၀တ်ရတဲ့အဖြစ် ( ပုပ္ဗသ...
စစ်တကောင်းသား ဘင်္ဂါလီများ (ပေးစာ - ၁၃၅)
စက်မှုကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် အဆင့်သုံးဆင့်ဖြင့် အကေ...
ပြည်သူလူထုအား ပေါ်တာ လုပ်အား မခေါ်ရေးသမ္မတ အမိန့် နယ်...
အကြွေစေ့ တွေကို စက်ကဘယ်လို စစ်ဆေးသလဲ
Sanction နဲ. ပတ်သက်ပြီး ရပ်တည်ချက်ကို ထုတ်ဖော်ပြော...
သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်နှင့် နက်နဲသော အသွင်ကူးပြောင်း...
KIA တပ်ရင်း ၁၄ ထောင်ထားတဲ့မိုင်းနင်းမိတဲ့ ဦးထွန်း...
၃ကျောင်းပြောင်းသောရှင်၊ ၃လင်ပြောင်းသောမယား၊ ၃ပါတီေ...
KIA မှ ထပ်မံအလင်းဝင်ရောက်
အရင် နှစ်ယောက် ထက် ငယ်ပေမယ့် အရင်နှစ်ယောက် ထက် ယဉ်...
သင်္ကြန်တွင်း အရေးပေါ် သန္ဓေတားဆေးများ အရောင်းမြင့်
သမ္မတဦးသိန်းစိန် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ သဝဏ်လွှာပေ...
ယနေ့ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် နှင့် ယနေ့ တပ်မ...
ပိတ်ဆို.ဒဏ်ခတ်အရေးယူရမည်ဟု အော်ပြီး မြန်မာပြည်ထဲ...
မဲခေါင်ဒေသတွင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဂျပန်က အထောက်အ...
နိုင်ငံတော်သမ္မတက မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းမှ နိုင်င...
ပြည်တွင်းမှ မြန်မာမိန်းခလေးများက ပြိုင်စရာ ဘာ အရည်...
ယခုနှစ် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ပြည်ပတင်ပို့မှုမှရငွေ အမေရိကန်...
အပယ်(၄)ပုံကို ရောက်မှာစိုးလို့ သတိပေးပါရစေ အသျှင်ပ...
Kachin News Group ၀က်ဘ်ဆိုက်ဟာ သတင်းအမှားကို အမျာ...
ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေး စတော့အိပ်ချိန်း တည်ထောင်ရန် တိ...
ပြန်လည်ကြည့်ရူရန် တောင်းဆိုသည့် ပရိတ်သတ်များ အတွက်...
Intel ကုမ္ပဏီမှ ပထမဆုံး စမတ်ဖုန်း ထုတ်လုပ်ရောင်းချမ...
ကျိုဒိုသတင်းဌာနမှ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ပြောသော စကားအားမ...
အသျှင်ပညာသီဟ(ခေါ်)ရွှေည၀ါဆရာတော် သင်္ကန်းဝတ်ဖြင့် နေသင...
လေလံ/ B.O.T လမ်းဂိတ်များ သတ်မှတ်နှုန်းထားအတိုင်း တိ...
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် ဂျပန်နိုင်ငံ တိုက...
သရုပ်ပျက်ဝတ်စား ဆင်ယင်မှု့ကို ဥပဒေနဲ့ အရေးယူလို့ရတယ...
မြန်မာနိုင်ငံ အပူရှိန်မြင့်၍ လူသေဆုံးမူများပြား
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် ဂျပန်နိုင်ငံ ကမာက...
ဧပြီလနောက်ဆုံးပတ် မုန်တိုင်းငယ် ဖြစ်ပေါ်နိုင်
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားပိတ်ဆို့မှု ရုတ်သိမ်းရေး အ...
သင်္ကြန်မှာ စည်းကမ်းမရှိဝတ်ဆင်တဲ့ အကြောင်း မခံနိုင်တ...
The Lady 2012 update
မြန်မာ့အင်တာနက်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဂျပန်က အကူအညီပေးမည်
လိင်တူချင်း ထိမ်းမြားခွင့်နဲ့ သားသမီး မွေးစားပိုင်ခွင့် ပြင်သစ်သမ္မတ လက်မှတ်ထိုး
[image: Photo: လိင်တူချင်း ထိမ်းမြားခွင့်နဲ့ သားသမီး မွေးစားပိုင်ခွင့် ပြင်သစ်သမ္မတ လက်မှတ်ထိုး မေ ၁၉ ရက် ၂၀၁၃ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ အကြီးအကျယ် ငြင်းခုံ ခဲ့ကြ...
ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ထ်ိုင်းနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာ
From : ..သမ္မတရုံး
ရန်ကုန် မေ ၁၈
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဒုတိယသမ္မတဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမို...
ပုသိမ်မြို့ ၊ ရေ ကြည်ဦးရပ်ကွက် ၁၃ လမ်း၌ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်(၃) ဦးမှ မြန်မာ မိသားစုတစ်ခုအား ရိုက်နှက်မှု တစ်ခုဖြစ်ပွါး
ကျွန်တော်တင်လိုက်သည့်အရေးကြီးသတင်းကို ဖွတယ်လို့ ပြောနေကြလို့ ဓါတ်ပုံပါ ထပ်တင်ပေးလိုက်တယ် ။ ဖွစရာလား မှတ်ပုံတင်နံပါတ်တွေရော ဖုန်းနံပါတ်ပါ တိတိကျကျ ထည့်ေ...
မြန် မာ အနီး ဘင်္ဂလာရေပြင် တွင် လူသေ အလောင်း ၇ လောင်း ထပ်မံ တွေ့ရှိ
မြန်မာ- ဘင်္ဂလာ နယ်စပ် ရေပြင် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ ရေပြင်တွင် နောက်ထပ် လူသေ အလောင်း ၇ လောင်းကို ယမန်နေ့ နံနက်က ထပ်မံ ဆယ်ယူရရှိခဲ့သည်ဟု ဘင်္ဂလာရဲက ပြောသည်။ ယခု ဆယ်ယူရရှိ...
လယ်လုပ်ခွင့်နှင့် ဖမ်းထားသူများ ပြန်လွှတ်ရေး လက်ပံတောင်း ဒေသခံများ တောင်းဆို
မေလ ၁၅ ရက် ၂၀၁၃ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မုံရွာခရိုင်၊ လက်ပံတောင်းတောင် ဒေသခံရွာသားများက ပုဒ်မ ၁၄၄ ရုတ်သိမ်းပေးရန်၊ လယ်ယာများ ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးခွင့် ပေးရန...
ခွေခေါက်၍ သိမ်ဆည်းထားနိုင်သော နိုကီယာ စမတ်ဖုန်း
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်ကတည်း Nokia မှ Concept အနေနဲ့ ဒီဇိုင်းပြပွဲမှာ ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ဖူးတဲ့ ဖုန်း ဖြစ် ပါတယ်။ UK ကိန်းဘရိတ်ခ်ျတက္ကသိုလ် နဲ့ ...
စားသောက်ဆိုင်များ အခွန် အမှတ်တံဆိပ်ပါ ဘောက်ချာ အသုံးပြုမှု နည်းပါး
[image: စားသောက်ဆိုင်များ အခွန် အမှတ်တံဆိပ်ပါ ဘောက်ချာ အသုံးပြုမှု နည်းပါး]
ရန်ကုန် မေ ၁၈ ရန်ကုန်မြို့ရှိ စားသောက်ဆိုင်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြားရှိ စားေ...
ကျောင်းအပ်ချိန် အလှူငွေကောက်ခံပါက ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်မည်
အစိုးရသစ်လက်ထက် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ တိုက် ဖျက်ရေးစီမံချက်များ ကြောင့် ယခုပညာသင်နှစ် ကျောင်း အပ် ချိန်တွင် သက်ဆိုင်ရာကျောင်းအုပ်က ကျောင်းသားမိဘများ ထံမှ အကြောင်...
နေပြည်တော် ရဲတပ်ဖွဲ့ နယ်ထိန်း(အရာရှိ) မွမ်းမံသင်တန်း ဆင်းပွဲကျင်းပ
[image: နေပြည်တော် ရဲတပ်ဖွဲ့ နယ်ထိန်း(အရာရှိ) မွမ်းမံသင်တန်း ဆင်းပွဲကျင်းပ] နေပြည်တော် မေ ၁၇
နေပြည်တော် ရဲတပ်ဖွဲ့ နယ်ထိန်း (အရာရှိ) မွမ်းမံသင်တန်း အမှတ်စ...
ခေတ်စနစ်တွေ ဘယ်လိုပြောင်းပြောင်း ဥပဒေ တစ်သမတ်တည်း ရှိနေသည့် တစ်နေရာ
ဗိုလ်မှူးကြီး ရေ။ ဗုံးခွဲတဲ့ တရားခံ၊ စင်ပြိုင်အစိုးရ ထောင်ပြီး နိုင်ငံတော် ပုန်ကန်တဲ့ တရားခံ၊ တပ်မတော်နဲ့ ရဲ တပ်ဖွဲ့ တွေကို စော်ကားတဲ့ တရားခံတွေကို အစိုး...
မွတ်ဆလင်ကုလားက မြန်မာသမီးပျို (၁၆)နှစ်သမီးလေးကို မုဒိမ်းကျင့်
မန္တလေး၊ မေ (၁၇)
ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက် ပထမ အန္တရာယ်သည် မွတ်ဆလင်ဖြစ်သည်၊ ဒုတိယ အန္တရာယ်သည် ဒေါ်စု နှင့် သူမကိုထောက်ခံသူများဖြစ်သည်
The first dangerous thing for Buddhism is Muslim. The second dangerous thing for buddhism is Daw Aung San Suu Kyi. See more photos http://www.xtywebworks....